ရဲက အနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်ဆယ်ကျော်သက် ဆန္ဒပြသူ ပြစ်မှုနှစ်ခုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရ
လေးလနီးပါးကြာ ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြအဓိကရုဏ်းအတွင်း ရဲအရာရှိက အနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ဆန္ဒပြသူကို ဆူပူအုံကြွမှုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရဲအရာရှိက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် Tsang Chi-kin ဟာ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့က Sha Tin တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင် ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့သူ ခုနစ်ဦးအနက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းဟာ သေနတ်ဒဏ်ရာကို ဆေးရုံတက် ကုသမှုခံယူနေရတာကြောင့် စွဲချက်တင်ခံရသူ အမည်စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ တရားခွင်သို့ လာရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဟောင်ကောင် အသံလွှင့်ဌာန RTHK ရဲ့ အဆိုအရ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Tsang Chi-kin ဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရပြီး အခြေအနေ တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ဥပဒေအရ ၎င်းကို စွဲချက်တင်ထားမှုဟာ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။
တိုနီလို့လည်း သိထားကြတဲ့ Tsang Chi-kin ဟာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် တရုတ်အမျိုးသားနေ့က ဟောင်ကောင် Tsuen Wan ခရိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဆန္ဒပြသူများ ထိပ်တိုက်တွေ့ ပဋိပက္ခအတွင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ အနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုခံခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအရ တိုနီနဲ့ အခြားဆန္ဒပြသူအချို့က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို သံပိုက်လုံးနဲ့ ထီးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိုသို့ ဝရုန်သုန်းကား ဖြစ်နေစဉ်အတွင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးက တိုနီကို အနီးကပ် အနေအထားမှ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကို ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပါတယ်။
ရဲအရာရှိနဲ့ ၎င်းရဲ့တွဲဖက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အလွန်သွေးဆူနေတဲ့ ဆန္ဒပြသူအုပ်စုက ဝိုင်းအုံလာခဲ့ရာ ၎င်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်ခဲ့တာကြောင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ကာကွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ဆန္ဒပြသူတွေက အလွန်သွေးဆူပြီး ရက်စက်တဲ့ပုံပေါက်နေခဲ့တယ်၊ သူတို့က တူတွေ၊ ခွတွေ၊ သံပိုက်လုံးတွေသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်၊ သူတို့က ရဲကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့အသက်ကို သူတို့ တွေးတောပူပန်ခဲ့ကြလား? ပြီးတော့ ရဲက ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ ဝေဖန်ခဲ့သူတွေဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ရဲ့အသက်နဲ့ တိုက်ခိုက်သူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ခွဲခြားပြီး သဘောထားကြတာလား?" လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲရဲ့ အကြီးတန်းရဲမှူး Tse Chun-chung က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂ ရက်) မှာ မေးခွန်းထုတ် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဆန္ဒပြအုပ်စုတွေကတော့ ထိုဖြစ်ရပ်အတွင်း ရဲအရာရှိက ၎င်းရဲ့သေနတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီး လူအုပ်အတွင်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ဆန္ဒပြကျောင်းသား တိုနီ အပစ်ခံရမှုဟာ ဟောင်ကောင်မှာ လေးလနီးပါးကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမှုလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ တိုနီလည်း အမည်စာရင်းပါဝင်တဲ့ ဆန္ဒပြသူ ခုနစ်ဦးကို ကြာသပတေးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၃ ရက်) က တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင် ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ရာ အားပေးထောက်ခံသူ ၂၀၀ ခန့် စုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး အဓိကရုဏ်း ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေ မြင့်တက်လာခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြင်မထွက်ရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့ ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့က အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ဆန္ဒပြမှုတွေကို ဖြိုခွင်းရာမှာ အင်အားအလွန်အကျွံသုံးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲမှုတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ အာဏာပိုင်တွေက စီစဉ်ခဲ့တဲ့ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်းမှစပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ အဓိကရုဏ်းတွေလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
Source: CNA, Reuters